रविको बहिनीले खोलिन् रञ्जनाको वास्तविकता, अष्ट्रेलियामा यस्तो सम्म भएको रहेछ ! (भिडियो) – " कञ्चनजंगा News "
रविको बहिनीले खोलिन् रञ्जनाको वास्तविकता, अष्ट्रेलियामा यस्तो सम्म भएको रहेछ ! (भिडियो)
No Comments on रविको बहिनीले खोलिन् रञ्जनाको वास्तविकता, अष्ट्रेलियामा यस्तो सम्म भएको रहेछ ! (भिडियो)
काठमाडौं । प्रिय रबि दाइ सबैलाई माया गर्ने मान्छे , सबैलाई सहयोग गर्ने मान्छे। राम्रो मान्छे नै भगवानको पियारो हुदो रैछ तेसैले हजुरलाई आफ्नो घर लियर जानू भयो। हजुरको आत्माले शान्ती मिलोश । रबि दाइको मृत्यु आत्माघाती हुनै सक्दैन यो सरासर मा’रिएको होस् मा’नसिक रुपले बिछिप्त बनाइ ,आफ्नै पत्नी बाट। बिहे भयको ३ बर्ष पुगेको, बिहे गरेको केटी रञ्जना मैनाली बिहे गरेछी अष्ट्रेलियामा बसेर बि येन पढेको र दाइ नेपाल मै रहनु भएको थियो।
बिहे गरेको केही समय पछी रन्जना मैनालीले तेरो र मेरो स म्बन्ध छैन भन्ने आफ्नो पति सग ,अनि फेरि पढ्न को लागि ससुरालाई फकायर पैसा माग्ने (करिब ४० लाख जति) दाइ चोखो माया गर्ने मान्छे आश गर्नु भयो, उस्ले तनाब दिराखी दाइ तड्पिराख्नु भयो। डिवोर्से दियेर आशलाई म र्दिनु पर्थियो , पैसाको लागि झुलायेर दाइलाई राखेको प्रमाणित भएको छ।
रन्जना मैनालीको जन्मेका घरमा दाइलाई बोलाउने प्रयोग गर्ने स् येता जानू ज्वाइँ , उता जानू ज्वाइँ , यो गर्नु, त्यो गर्नु भनेर खुब प्रयोग गरियो । सबैलाई माया गर्न दाइ सबैलाई सहयोग गर्नु हुन्थियो। रन्जना मैनालीले आफ्नो सम्बन्धकोबारे घर मा सबैलाई बतायेको पाइयो। सबैकुरा जान्दा जान्दै पैसाको लागि र आफ्नो स्वार्थको लागि दाइलाई प्रयोग गरियोको प्रमाणित भयको छ। करिब ठ दिन अगाडि रन्जना मैनाली नेपाल आएको – दाइको अनुहार पनि हेर्न नचाहने तर पैसा माग्न आउन खोज्ने सबै परिवार भएर स् छोरीको अष्ट्रेलियामा कलेज फि तिर्नको लागि। रन्जना मैनाली को बाउ मेरो छोरीलाई छोयो भन्ने ब’लात्कारको केस हाल्दिन्छु भन्ने दाइलाई
दाइको अन्तिम सासले रन्जना भन्दा हेर्दा नि नहेर्ने यो कस्तो खाल्को मन को भगवान । यो कस्तो खाल्को प्रवृ त्ति हो भगवान ।।रन्जना मैनालीको अस्लिरुप रबि दाइको परिवारले बल्ल चिन्नु भयो , चिनिसक्दा दाइ भगवानको पियारो हुनु भयो। हाल दाइको ह’त्यारा रन्जना मैनाली थुनामा छ। कडा भन्दा कडा कारबाहि गरियोस् मेरो दाइको आत्मालाई शान्ती मिलोस।
अहिले सो घटनामा रञ्जना मैलानी अदालतवाट एक लाख रुपैया धरौटीमा छुटीसकेकी छन् । अदालतवाट छुटेपछि उनले रवि अष्ट्रेलिया जानका लागि आफुसंग विवाह गरेको र भिषा नलागेपछि आफुसंग टाढीएको प्रतिकृया दिएकी छन् । अहिले रञ्जना र रविको परिवारमा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै भनाईहरु सार्वजनिक भइरेहेका छन् । रविको निधन पछि आफुलाई रविको वहिनी बताउने अस्मिताले माथिको भावुक स्टाटस फेसवुकमा लेखेकी थिइन् । अहिले उनले फेरी सो घटनाका सम्बन्धमा केही तथ्य सहित भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले सो भिडियोमा घटनाका रहस्यहरु खुलाएकी छन् ।
← पुस १० गते लाग्ने खण्डग्रास सुर्य ग्रहणको प्रभाव– ओली, प्रचण्ड र भट्टराईलाई हानि, देउवालाई लाभ → यिनी हुन् आज बिहान बसको ठ’क्करबाट मृ’त्यु भएकी गोरखाकी सृष्टि पन्त !